Ciidanka Indhacadde oo la wareegay Daljirka Dahsoon | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidanka Indhacadde oo la wareegay Daljirka Dahsoon
Ciidamo uu hoggaaminayo Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad ‘Indhacadde’ ayaa caawa la wareegay amaanka taalada Daljirka Dahsoon oo berri la filayo inuu ka dhaco bannaan-bax xooggan oo ay hor boodayaan Madaxda Midowga musharixiinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa caawa kula hadlay saxaafadda Taalada Daljirka wuxuuna sheegay in aysan dalka ka jirin Dowlad iyo kala danbeyn taasina ay sababtay inuu u istaago sugidda amniga dibad-baxayaasha.
“Halkaan waxaan u imid kormeer, waa meesha uu birri bannaan-buxu ka dhacyo, waajibaadkeyga shaqo ayaana heystaa”. Ayuu yiri Indhacadde.
Mar la weydiiyay cidda u soo wakiilatay inuu sugu amaanka bannaan-baxayaasha ayuu ku jawaabay, “Masuuliyadda I saran ayaa isoo wakiilatay, sidaad ogtihiin dalku Dowlad malaha, oo Baarlamaanka waqtigiisi waa dhamaaday, Madaxweynaha waqtigiisi waa dhamaaday, Xukuumadda waqtigeedi wuu dhamaaday, Dalku Dowlad malaha, sidaas daraaddeed waxaa I keenay damiirkeyga”.
Jeneraal Indhacadde wuxuu sheegay inuu dalka u soo halgamay, waxa kaliya ee hadda la haayana ay tahay doorashada Afarta sano ah isla-markaana uusan ogolaan doonin in waxa yarka ah ee heshiiska lagu yahay lagu tunto.
Mar la su’aalay halka ay aadeen ciidamadii hore u joogay aagga Daljirka ee hayay maamulka goobaha ay ciidankiisu tageen, ayuu ku jawaabay, “Maamul ma jiro, dalku maamul malaha, maamulka jira waa maamul waqtigiisi dhamaaday”.
Wasiirkii hore ee Gaashaan-dhigga Jeneraal Indhacadde ayaa sheegay in Wasiirada hadda joga ay la mid yihiin isaga, maadaama uu hore u soo noqday wasiir isla-markaana kuwa hadda jooga uu waqtigoodi dhaamay.
Farmaajo ayuu ku tilmaamay Madaxweyne hore, wuxuuna la meel Cabdiqaasin Salaad Xasan oo hore u soo noqday Madaxweynaha Soomaaliya.
“Farmaajo iyo Cabdiqaasin caawa waa isku mid, waa labo Madaxweyne oo hore, wuxuu ku joogaa si xoog ah oo sharci darro ah, oo qalad ah, oo gardarro ah, taas ayaana diidannahay”. Ayuu warfidiyeenka la wadaagay Indhacadde.
Ciidamada Dowladda ayuu ugu baaqay in ay ka fogaadaan in loo adeegsado dan gaar ah oo ay daadiyaan dhiigga dadka shacbka ah, wuxuuna xasuusiyay in Farmaajo uusan lahayn hubka, gaadiidka iyo mushaarka la siiyo ciidamada ay laga keenay jeebabka shacabka Soomaaliyeed.
Jenanku wuxuu hoosta ka xariiqay in beri uu si nabad ah ku dhacayo bannaan-baxa, dadka reer Muqdisho ayuu ugu baaqay in ay ka soo qeyb galaan, si nabad ahna u mudaharaadaan.